कसरी हुन्छ समानुपातिक सिटको हिसाबकिताब ? – MEDIA DARPAN
कसरी हुन्छ समानुपातिक सिटको हिसाबकिताब ?
मिडिया दर्पण	 पछिल्लो अपडेट Nov 17, 2017
काठमाडौँ, ३० कात्तिक- प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा देशभरबाट ३ प्रतिशत अर्थात् करिब तीन लाख मत पाउने दलले मात्र समानुपातिकमा सिट पाउनेछन् । अघिल्लो निर्वाचनमा भने २० हजार मत ल्याउनेले पनि एक सिट पाएका थिए । तर, यसपालि ३ प्रतिशत थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले साना सबैजसो दल संसद्बाट बढारिने भएका छन् । ३ प्रतिशत मत ल्याउन नसक्ने र प्रत्यक्षतर्फ १ सिट ल्याउने दलका सांसद संसद्मा स्वतन्त्र मानिनेछन् । त्यस्तै प्रत्यक्षमा एक सिट पनि नजितेमा समानुपातिकमा जति सिट ल्याए पनि सांसदले दलीय हैसियत पाउनेछैनन् ।
स्थानीय तहको भन्दा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा करिब १३ लाख मतदाता बढेका छन् । त्यहीअनुसार ३% ल्याउनुपर्ने मतको संख्या पनि बढ्नेछ । आयोगका उपसचिव सूर्यप्रसाद अर्यालका अनुसार १ करोड ५४ लाख मतदातामध्ये करिब १ करोड १० लाख मत खस्यो र करिब १ करोड मत सदर भयो भने १ करोड मतको ३ प्रतिशत अर्थात् ३ लाख मत प्राप्त गर्ने दलले मात्रै सांसद पाउँछ । उनका अनुसार कुल सदर मतको ३ प्रतिशत मत कटाउने दलको मत मात्रै हिसाबमा आउनेछ, नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।
गाउँपालिकाद्वारा दौरा–सुरुवाललाई ‘औपचारिक पोशाक’ घोषणा, औपचारिक कार्यक्रममा अनिवार्य